CommonsDelinker အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
CommonsDelinker အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ
CommonsDelinker အတွက် ဆွေးနွေး ပိတ်ပင်တားဆီးမှု မှတ်တမ်း အပ်လုပ်တင်ထားသည်များ မှတ်​တမ်း​များ​ အလွဲသုံးစားပြုမှု မှတ်တမ်း
၁၃:၀၇ ၁၃:၀၇၊ ၂၅ ဇွန် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၈၃‎ မြင်းခြံမြို့ ‎ Removing Myingyan.jpg, it has been deleted from Commons by Taivo because: Copyright violation; see c:Commons:Licensing (F1): [[:c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by May Thu Zar Tu လက်ရှိ
၁၄:၄၇ ၁၄:၄၇၊ ၂၄ ဇွန် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၄၇‎ အခြားတစ်ဘက် ‎ Removing Viber_image_2022-06-23_17-10-56-504.jpg, it has been deleted from Commons by EugeneZelenko because: Copyright violation; see c:Commons:Licensing ([[:c:COM:CSD#F1|
၁၄:၅၁ ၁၄:၅၁၊ ၂၃ ဇွန် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၇၉‎ ကမန်လူမျိုး ‎ Removing [[:c:File:Young_Kaman_stage_a_performance_for_water_festival._The_bow_carried_by_the_men_signifies_their_service_as_archers_in_the_army_of_the_Mrauk-U_kings.jpg|Young_Kaman_stage_a_performance_for_water_festival._The_bow_carried_by_the_men_signif လက်ရှိ စာတွဲ: လက်ဖြင့် နောက်ပြန်ပြင်ခြင်း
၁၄:၄၁ ၁၄:၄၁၊ ၂၃ ဇွန် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၅၀‎ ကမန်လူမျိုး ‎ Removing Kaman_Ethnic_Youths.jpg, it has been deleted from Commons by Fitindia because: No permission since 15 June 2022. စာတွဲ: နောက်ပြန်ပြင်ခဲ့ပြီး
၁၄:၄၁ ၁၄:၄၁၊ ၂၃ ဇွန် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၈၀‎ ကမန်လူမျိုး ‎ Removing Kaman_Ethnic_Mosque_From_Thabyuvhai_Village_Thandwe.jpg, it has been deleted from Commons by Fitindia because: No permission since 15 June 2022. စာတွဲ: နောက်ပြန်ပြင်ခဲ့ပြီး
၁၄:၄၈ ၁၄:၄၈၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁‎ သီရိခေတ္တရာပြတိုက် ‎ Replacing Srikestra_Museum.jpg with File:Sri_Ksetra_Museum.jpg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion3(obvious error)). လက်ရှိ
၁၆:၀၁ ၁၆:၀၁၊ ၁၆ ဇွန် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၇၇‎ စီးရီး အေ ‎ Removing Serie_a_2021.svg, it has been deleted from Commons by Túrelio because: Copyright violation; see c:Commons:Licensing (F1): Non-free logo above [[:c:Commons:Threshold of origi လက်ရှိ
၁၂:၀၁ ၁၂:၀၁၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၉‎ တမ်းပလိတ်:User philosophy ‎ Removing Philosophy.png, it has been deleted from Commons by Rosenzweig because: per c:Commons:Deletion requests/File:Philosophy.png.
၀၈:၄၅ ၀၈:၄၅၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၄၅‎ ၂၀၀၆ အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ ‎ Removing Khalifa_Stadium,_2006_Asian_Games,_Doha.jpg, it has been deleted from Commons by Wdwd because: per [[:c:Commons:Deletion requests/Files in Category:Khalifa International Sta လက်ရှိ
၁၅:၄၀ ၁၅:၄၀၊ ၁၁ ဇွန် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၆‎ ယွန်းမြတ်သူ ‎ Removing Yoonmyatthu.jpg, it has been deleted from Commons by EugeneZelenko because: Copyright violation; see c:Commons:Licensing (F1): Promo/press photo. လက်ရှိ
၇ ဇွန် ၂၀၂၂
၁၈:၄၂ ၁၈:၄၂၊ ၇ ဇွန် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၈‎ မြိုဟူသောဝေါဟာရ ‎ Removing Three_topless_Mru_women.jpg, it has been deleted from Commons by Fitindia because: No permission since 30 May 2022. လက်ရှိ
၁၈:၄၂ ၁၈:၄၂၊ ၇ ဇွန် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၈၀‎ မြို(မရူစာ)ဘာသာစကား ‎ Removing Three_topless_Mru_women.jpg, it has been deleted from Commons by Fitindia because: No permission since 30 May 2022. လက်ရှိ
၀၆:၄၄ ၀၆:၄၄၊ ၇ ဇွန် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ မီတီအိုရာ ‎ Replacing Meteora`s_monastery_2.jpg with File:Meteora's_monastery_2.jpg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion6(maintenance or bug fix) · Changing the backtick to an aapostrop လက်ရှိ
၆ ဇွန် ၂၀၂၂
၁၃:၂၉ ၁၃:၂၉၊ ၆ ဇွန် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅‎ တူရကီဘာသာစကား ‎ Replacing Turkce.ogg with File:Tr-Türkçe.oga (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion4(harmonizing names of file set) · 207.81.187.41). လက်ရှိ
၁၃:၀၃ ၁၃:၀၃၊ ၆ ဇွန် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၃‎ ကင်းလိပ်ချော ‎ Replacing Eutropis_macularia_(bronze_grass_skink)_on_a_tree_trunk.jpg with File:Eutropis_(skink)_on_a_tree_trunk.jpg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion 1 (original uploader’ လက်ရှိ
၄ ဇွန် ၂၀၂၂
၂၁:၂၀ ၂၁:၂၀၊ ၄ ဇွန် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၈၉‎ ရွှေတြိဂံအထူးစီးပွားရေးဇုံ ‎ Removing မြန်မာ_ထိုင်း_လာအို_နယ်နမိတ်.jpg, it has been deleted from Commons by Yann because: Media missing permission.
၂၀:၁၆ ၂၀:၁၆၊ ၄ ဇွန် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၉၆‎ ရွှေတြိဂံအထူးစီးပွားရေးဇုံ ‎ Removing လက်ပံကျွန်း.jpg, it has been deleted from Commons by Yann because: Media missing permission.
၂၀:၁၅ ၂၀:၁၅၊ ၄ ဇွန် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၈၀‎ ရွှေတြိဂံအထူးစီးပွားရေးဇုံ ‎ Removing TANGRAN_INTERNATIONAL_PLACE..jpg, it has been deleted from Commons by Yann because: Media missing permission.
၁၉:၅၃ ၁၉:၅၃၊ ၄ ဇွန် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၄၂‎ ရွှေတြိဂံအထူးစီးပွားရေးဇုံ ‎ Removing GOLDEN_TRIANGLE.jpg, it has been deleted from Commons by Yann because: Media missing permission.
၁၂:၃၉ ၁၂:၃၉၊ ၄ ဇွန် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၅၁‎ ၂၀၁၂ ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ ‎ Removing Rakhine_Crisis_2012.jpg, it has been deleted from Commons by Fitindia because: No permission since 25 May 2022. လက်ရှိ
၁၀:၃၂ ၁၀:၃၂၊ ၂ ဇွန် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၉၈‎ မြန်မာ့ဟာဂ်ျခရီးစဉ် ကြိုးပမ်းမှုသမိုင်း ‎ Removing Burma_Barat_Guesthouse.jpg, it has been deleted from Commons by Racconish because: Missing essential information such as license, [[:c:COM:PERMISSION|permissi
၂၀:၄၉ ၂၀:၄၉၊ ၃၁ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၅၆‎ သက်ဦးကပ် ‎ Removing Paleozoic_era.jpg, it has been deleted from Commons by Túrelio because: Copyright violation: shutterstock image by Alena Hovorkova [https://www.shutterstock.com/image-illustration/pre
၂၀:၄၉ ၂၀:၄၉၊ ၃၁ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၃၁‎ အာခီလိုခို့စ် ‎ Removing Archilochus,_one_of_the_great_greek_poet.jpg, it has been deleted from Commons by Túrelio because: Copyright violation: source given is "from internet". (fo
၁၄:၄၁ ၁၄:၄၁၊ ၃၁ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၃၈‎ ဂျင်းယောင်း ‎ Removing Got7-Jinyoung.jpg, it has been deleted from Commons by EugeneZelenko because: c:Commons:Licensing: promo/press photo. စာတွဲ: လက်ဖြင့် နောက်ပြန်ပြင်ခြင်း
၁၄:၄၀ ၁၄:၄၀၊ ၃၁ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၃၄‎ ဒုတိယ‌မြောက် သတို့သား ‎ Removing ဒုတိယမြောက်_သတို့သား.jpg, it has been deleted from Commons by EugeneZelenko because: c:Commons:Licensing: promo/press photo.
၀၈:၃၉ ၀၈:၃၉၊ ၂၈ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၇‎ တာဒါရှီ ရာနိုက်အိ ‎ Removing Tadashi_Yanai.jpg, it has been deleted from Commons by Túrelio because: Copyright violation: Tineye yield one result in 2013 https://tineye.com/search/0a15dafbb7995ffd0f557427baf97d1d လက်ရှိ
၁၉:၁၄ ၁၉:၁၄၊ ၂၆ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁‎ ခုနှစ်နှစ်စစ် ‎ Replacing Bandera_de_España_1760-1785.svg with File:Flag_of_Spain_(1760–1785).svg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion 4). လက်ရှိ
၁၆:၂၀ ၁၆:၂၀၊ ၂၆ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၃၅‎ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် ‎ Removing National_emblem_of_Afghanistan.svg, it has been deleted from Commons by Taivo because: Broken redirect (G2). လက်ရှိ
၁၅:၂၀ ၁၅:၂၀၊ ၂၆ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၃၉‎ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် ‎ Removing National_Emblem_of_Afghanistan_002.svg, it has been deleted from Commons by Taivo because: Broken redirect (G2).
၂၃:၄၅ ၂၃:၄၅၊ ၂၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၀၁‎ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် ‎ Removing Arms_of_the_Islamic_Emirate_of_Afghanistan.svg, it has been deleted from Commons by Ellywa because: per [[:c:Commons:Deletion requests/File:Arms of the Islamic Emirate
၂၃:၄၅ ၂၃:၄၅၊ ၂၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၄၇‎ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ‎ Removing Arms_of_the_Islamic_Emirate_of_Afghanistan.svg, it has been deleted from Commons by Ellywa because: per [[:c:Commons:Deletion requests/File:Arms of the Islamic Emirate လက်ရှိ
၀၆:၃၉ ၀၆:၃၉၊ ၂၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၀‎ ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံ ‎ Replacing Coat_of_arms_of_Belarus_(2020).svg with File:Coat_of_arms_of_Belarus_(2020–present).svg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion 3). လက်ရှိ
၀၀:၂၃ ၀၀:၂၃၊ ၂၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၅၅‎ ရူးသွပ်မှု၏ အနန္တစကြာဝဠာမျိုးစုံအတွင်းဝယ် ဒေါက်တာ စထရိန့်ချ် ‎ Removing Doctor_Strange_in_the_Multiverse_of_Madness_poster.jpg, it has been deleted from Commons by Minorax because: Fair use material is not permitted o
၀၆:၂၉ ၀၆:၂၉၊ ၂၁ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ ချစ်ပုဘဲဆွတ်မြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး ‎ Replacing Symbol_of_Chippubetsu,_Hokkaido.svg with File:Emblem_of_Chippubetsu,_Hokkaido.svg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion4(harmonizing names of file set)). လက်ရှိ
၀၆:၁၇ ၀၆:၁၇၊ ၂၁ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၉‎ အပင် ‎ Replacing Diversity_of_plants_image_version_5.png with File:Diversity_of_plants_(Streptophyta)_version_2.png (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion2(meaningless or ambiguous n လက်ရှိ
၁၂:၁၀ ၁၂:၁၀၊ ၂၀ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၉‎ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ ‎ Replacing Flag_of_Sharjah.svg with File:Flag_of_Sharjah_and_Ras_Al_Khaimah.svg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion2(meaningless or ambiguous name)). လက်ရှိ
၀၁:၁၄ ၀၁:၁၄၊ ၁၇ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၂‎ အုံးလီးဖန် ‎ Removing OnlyFans_text_(2).svg, it has been deleted from Commons by Ellywa because: per c:Commons:Deletion requests/File:OnlyFans text.svg. လက်ရှိ
၀၇:၂၆ ၀၇:၂၆၊ ၁၀ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၅၁‎ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ သမ္မတ ‎ Removing Roh_Tae-woo_presidential_portrait.jpg, it has been deleted from Commons by Túrelio because: CSD G7 (author or uploader request deletion): per previous edi
၁၇:၅၄ ၁၇:၅၄၊ ၇ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၃၈‎ ငုယင် ဖူထျောင် ‎ Removing Nguyễn_Phú_Trọng's_signature.png, it has been deleted from Commons by Rosenzweig because: per c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by Lee Gok Da.
၀၀:၁၂ ၀၀:၁၂၊ ၇ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အဲရိမိုမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး ‎ Replacing Symbol_of_Erimo,_Hokkaido.svg with File:Emblem_of_Erimo,_Hokkaido.svg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion3(obvious error) · Emblem isamore accurate translation လက်ရှိ
၂၂:၅၁ ၂၂:၅၁၊ ၆ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ ပက်စီ ‎ Replacing Pepsi_logo_new.svg with File:Pepsi_logo_(2014).svg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion4(harmonizing names of file set)). လက်ရှိ
၀၃:၄၃ ၀၃:၄၃၊ ၄ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၇‎ မလေးသင်းခွေချပ် ‎ Removing Manis_javanica_range_2.jpg, it has been deleted from Commons by Pi.1415926535 because: per c:Commons:Deletion requests/File:Manis javanica range 2.jpg. လက်ရှိ
၂၃:၂၉ ၂၃:၂၉၊ ၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၉‎ အဲရိမိုမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး ‎ Replacing Symbol_of_Erimo,_Hokkaido.svg with File:Emblem_of_Erimo,_Hokkaido.svg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion3(obvious error) · Emblem isamore accurate translation စာတွဲ: နောက်ပြန်ပြင်ခဲ့ပြီး
၂၁:၄၂ ၂၁:၄၂၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၇‎ တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း Islamic Republic of Afghanistan ‎ Replacing Flag_of_Afghanistan_(2004–2013).svg with File:Flag_of_Afghanistan_(2004-2021,_Variant).svg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion3(obvious error) · See: https://en.w လက်ရှိ
၀၅:၀၀ ၀၅:၀၀၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၃၁‎ မယ်စကြဝဠာ မြန်မာ ‎ Removing Miss_Universe_Myanmar_Logo.png, it has been deleted from Commons by EugeneZelenko because: c:Commons:Licensing: non-trivial logo.
၀၅:၀၀ ၀၅:၀၀၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၅၁‎ မယ်စကြဝဠာ မြန်မာ ၂၀၁၃ ‎ Removing Miss_Universe_Myanmar_2013_logo.png, it has been deleted from Commons by EugeneZelenko because: c:Commons:Licensing: non-trivial logo.
၀၅:၀၀ ၀၅:၀၀၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၄၅‎ မယ်စကြဝဠာ မြန်မာ ၂၀၁၄ ‎ Removing Miss_Universe_Myanmar_2014.png, it has been deleted from Commons by EugeneZelenko because: c:Commons:Licensing: non-trivial logo.
၀၄:၃၆ ၀၄:၃၆၊ ၂၀ ဧပြီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၃‎ အင်ဂိုလာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် ‎ Replacing Coat_of_arms_of_Portuguese_West_Africa_(1951-1975).svg with File:Coat_of_arms_of_Portuguese_Angola_(1951–1975).svg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion3(obvious er လက်ရှိ
၀၅:၄၅ ၀၅:၄၅၊ ၁၉ ဧပြီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၃၈‎ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ‎ Removing National_Anthem_Of_Vietnam.ogg, it has been deleted from Commons by Fitindia because: No permission since 11 April 2022.
၁၅:၁၃ ၁၅:၁၃၊ ၁၈ ဧပြီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၉၄‎ ညောင်စာရေးမြို့ ‎ Removing ဖုန်းမယ်တက်ခါးတည်ထားခဲ့သောရှင်ဂေါတမဘုရားကြီး(_၂၀၂၁_).png, it has been deleted from Commons by Wdwd because: per [[:c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:ဆောင်ရွက်ချက်များ/CommonsDelinker" မှ ရယူရန်